Iwashi lezinkanyezi: kuyini, izici, ukusebenza kanye nokufuna ukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El iwashi lezinkanyezi wedolobha ungenye yezindawo eziheha izivakashi ngoba inomlando nomsebenzi omuhle. Isibonelo, kubavakashi ePrague, iwashi lezinkanyezi lingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu. Phakathi kwezindaba ezixoxwayo kukhona ezinye ezingakholeki.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela wonke umlando nezici zewashi lezinkanyezi.
1 Iwashi lezinkanyezi elikwazi ukubonisa isikhathi
2 Umthamo wewashi lezinkanyezi
3 Ezinye izifiso
Iwashi lezinkanyezi elikwazi ukubonisa isikhathi
Umlando wewashi lezinkanyezi lasePrague unemininingwane eminingi engakholeki neze. Isibonelo, esinye sazo ukuthi size enkosini eyakha leli washi ukuze ingakwazi ukudala elinye elinjalo. Kukhona labo abakholelwa ukuthi kuyintelezi esebenza ukugcina zonke izakhamuzi ziphephe ngokuphelele. Njengoba ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye neqiniso lezinganekwane ezithile emlandweni kutholakala, sishiya lezi zindaba emuva ukuze sigxile ekusebenzeni kwazo. Sisadlula iminyaka, izingcezu zewashi lezinkanyezi zihlala zithakazelisa kunoma yimuphi umthandi wezinhlelo ze-analog.
Futhi iwukuthi iwashi elikwazi ukubonisa isikhathi ngezindlela eziningi. Idizayini yilelo sibongile futhi iqukethe amagiya ama-3 akwazi ukumaka izikhathi ezi-5 ngasikhathi sinye. Uma sibheka ingxenye engenhla sibona indawo yokudlala onodoli ephakathi kwezimpumputhe ezimbili lapho kudwetshwa khona abaphostoli abangu-12. Ngamunye wabo ushiya njalo emizuzwini engama-60 ukukhombisa ukuthi yisiphi isikhathi. Izibalo zesimanje ukwedlula iwashi, yize zivela ngekhulu le-XNUMX. Lokhu kusho ukuthi izibalo zafakwa ngemuva kokudalwa kwazo.
Ngezansi sinekhalenda elinemifanekiso yezinyanga nezinkathi. Futhi, khombisa ukuthi ngubani oNgcwele wosuku ngalunye lonyaka. Womabili amaqembu anentshisekelo kwezobuciko eheha izinkulungwane zezivakashi ePrague unyaka nonyaka. Igugu laleli washi lingumzimba ophakathi nendawo njengoba yayiyisiqeshana esakhiwe ekuqaleni ngo-1410.
Umthamo wewashi lezinkanyezi
Futhi ukuthi leli washi liyamangaza kakhulu njengoba likwazi ukukhombisa isikhathi ngezindlela ezinhlanu ezahlukene. Izingxenye zalo zinelukuluku lokwazi. Sizocacisa ngamunye wabo. Ngakolunye uhlangothi, sinelanga legolide elizungeza umbuthano wezinkanyezi. Le ngxenye ikwazi ukusikhombisa amahora amathathu ngasikhathi sinye. Inkomba yokuqala isikhundla sesandla segolide. Itholakala ezinombolweni zamaRoma futhi isitshela isikhathi ePrague. Lapho isandla sidlula emigqeni yegolide sikhombisa isikhathi esisesikhathini samahora angalingani. Ekugcineni, lapho bedlula eringini elingaphandle, bamaka amahora ngemuva kokuphuma kwelanga ngokwesikhathi saseBohemia.
Elinye lamakhono ewashi lezinkanyezi ukukhombisa isikhathi esiphakathi kokuphuma nokushona kwelanga. Uhlelo lokukhombisa lesi sikhathi luhlukaniswe "ngamahora" ayi-12. Ukwenza lokhu, sebenzisa ibanga eliphakathi kwelanga kanye nendawo emaphakathi yomkhakha. Khumbula ukuthi lesi silinganiso siyashintsha unyaka wonke, ngoba akuzona zonke izinsuku ezilinganayo. Njengoba sisondela enkathini yasehlobo, izinsuku zinde futhi isikhathi esiphakathi kokuphuma kwelanga nokushona kwelanga siside. Ngokuphambene nalokho, lapho sisesikhathini sasebusika sinobude obufushane phakathi kokuphuma nokushona kwelanga.
Okwesithathu, emaphethelweni angaphandle ewashi lezinkanyezi afaka izinombolo ezibhalwe ngohlamvu lukaSchwabacher ngegolide. Lezi zinombolo ziphethe ukukhombisa imisebenzi njengoba yenziwa eBohemia futhi iqala ukumaka kusuka ku-1 kusihlwa. Ukuze ihambisane nesikhathi selanga, amasongo ahamba unyaka wonke ukuze ikalwe kahle.
Ngakolunye uhlangothi, sineringi lezinkanyezi. Kuphethe ukukhombisa ukuthi ilanga likuphi ku-ecliptic. I-ecliptic ayilutho nje ijika lapho umhlaba uhamba uzungeze ilanga. Kungumugqa lapho ukunyakaza komhlaba kwenziwa khona. Ukuhleleka kwendandatho yezinkanyezi kuchazwa njengesisekelo sendiza elliptical. Okujwayelekile kakhulu ukukuthola kunoma yiliphi iwashi lezinkanyezi. Ukuhamba kuncike kudiski ehambisa indandatho yezodiacal.
Ukuhleleka kwaleli ring kungenxa yokusetshenziswa kokuvikelwa okuyindilinga kwendiza ye-ecliptic. INorth Pole isetshenziswa njengesisekelo sale ndiza. Kungabonakala njengengxenye exakile, kepha yilungiselelo elitholakala kumawashi amaningi wezinkanyezi. Ekugcineni, esinye sezintshisakalo yilokho kukhona umkhakha wenyanga osikhombisa izigaba zesathelayithi yethu. Ukunyakaza lapha kufana newashi elikhulu kepha kushesha ngandlela thile. Ukugqama okukhulu kokutholwa kwewashi lezinkanyezi kwakutholakala emzimbeni ophakathi.
Okunye ukwazi ukuthi yakhiwa i-disc emile maphakathi nama-disc amaningi ajikelezayo asebenza ngokuzimela ngokuphelele. Njengesifinyezo, siyabona ukuthi inendandatho yezinkanyezi kanye nomphetho ongaphandle okubhalwe nge-Schwabacher typography. Futhi inezinaliti ezintathu: esinye sazo yisandla, isandla sesibili yilanga elihamba ngalo lisuka phezulu liye phansi kanti okwesithathu iphuzu lenkanyezi elixhunywe eringini lezinkanyezi.
Namuhla kungaba uhlelo olulula ngokubukeka, kepha osukwini lwayo bekuyindlela yobuchwepheshe. Sikhuluma ukuthi isiqeshana sokuqala sakhiwa ngonyaka we-1410 futhi akukho okunye okungaqhathanisa ubuchwepheshe balesosikhathi nobamanje. Kumele kuqashelwe ukuthi uhlelo lwemishini luhamba kancane kangangokuba akunakwenzeka ukwazisa ukuhamba ngeso lomuntu ngesikhathi sangempela. Uma sifuna ukubona ukuhamba kwewashi lezinkanyezi kufanele siqophe bese sidlulela phambili. Kukhona nezinye izinhlobo zamakhompyutha lapho singenza izivivinyo ezihlukile ukubona ukuthi kuhamba kanjani nokuthi kusebenza kanjani.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngewashi lezinkanyezi lasePrague nezici zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Iwashi lezinkanyezi
Intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni